६८ वर्षीय बृद्धको मती बिग्रीएपछि चिसोछिँडीको बास …. ३ वर्ष कैद र ८ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने…… – Taja Khawar
६८ वर्षीय बृद्धको मती बिग्रीएपछि चिसोछिँडीको बास …. ३ वर्ष कैद र ८ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने……
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन ०३, २०७८ समय: ११:२८:५२
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले फैसला भएको १५ वर्षपछि फरार ठग प,क्रा,उ गरेको छ । जिल्ला अदालत काभ्रेले गुठी ठगी अभियोगमा कैद र जरिवानासहित २०६३ सालमा फैसला गरेकोमा प्रतिवादीलाई प्रहरीले शुक्रबार प,क्रा,उ गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका सूचना अधिकारी प्रहरी नायवउपरिक्षक हरि खतिवडाका अनुसार जिल्लाको चौरीदेउराली गाउँपालिका वडा नं. ६ का ६८ वर्षीय बिदुरराज गिरीलाई प,क्रा,उ गरेको हो । उनलाई जिल्ला अदालतले ठगी गरेको फैसला गर्दै ३ वर्ष ४ महिना १२ दिन कैद र ८ लाख ५ हजार जरिवाना तोकेको थियो ।
‘फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा जिल्ला अदालत काभ्रेले दिएको लागत अनुसार खोजतलास गर्ने क्रममा फरार प्रतिवादी गिरीलाई प,क्रा,उ गरेका हौँ’ खतिवडाले भने,‘प,क्रा,उपछि हामीले तत्काल जिल्ला अदालत काभ्रेमा पेश गरेका छाँै ।’
प्रहरी नायव उपरिक्षक खतिवडाका अनुसार फरार प्रतिवादी गिरीलाई काठमाडौं स्थित बालाजुमा लुकीछिपी रहेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले प,क्रा,उ गरेको हो ।
चितवनमा साथीले लिए आफ्नै साथीको ज्यान ! चितवनको राप्ती नगपालिका ९ मा एक व्यक्तिले छिमेकीको ह,x त्या गरेका छन्। राप्ती ९ शीतल टोलका ५९ वर्षीय कान्छा लामाको ह,x त्या भएको हो।
कान्छाको ह,x त्यामा संलग्न भएको आरोपमा छिमेकी दशरथ ठकुरीलाई प्रहरीले प,क्रा,उ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार शुक्रबार राति सँगै बसेर खानपिन गर्दा उनीहरुबीच वि’वा’द भएको थियो सोही क्रममा दशरथले लामालाई घनले प्रहार गरेका हुन्।
घटनास्थलबाट श,वसँगै ह,x त्या आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरी र स्थानीय बीच झ,ड,प,समेत भएको थियो । स्थानीले प,क्रा,उ परेका व्यक्तिमाथि आ,क्र,म,ण गर्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्दा झ,ड,प भएको हो।
प्रहरीले हवाई फायर गरेपछि स्थानीय तितरभितर भएका थिए। त्यसक्रममा प्रहरी निरीक्षकसहित पाँच जना प्रहरी घाइते भएका छन्। उनीहरूको उपचार भैरहेको छ दुई जना स्थानीय व्यक्ति घाइते भएका छन् । मृ,तकको श,वलाई भरतपुर अस्पताल राखिएको छ ।
Last Updated on: September 19th, 2021 at 11:28 am